Bakka diraa, diraa biroo keessatti argamuu deebisa.
Faankishiniin Instr bakka walfakkiin itti argame deebisa. Yoo diraan hin argamne, faankishinichi 0 deebisa.
Start: Himata lakkoofsaa kan jalqaba barbaachuu qurxa diraa adda baafame, dira tokko keessaa agarsiisa. yoo ulaagaa kana dhiifte,barbaachi kan jalqabu arfii jalqabaa diraa irraati. 65535 gatii guddaa eeyyamamu dha.
Text1: Himata diraa kan ati barbaaduuf taatu dha.
Text2: Himata diraa kan ati barbaaduuf taatu dha.
Walmadaalli: Dirqaalee himata lakkoofsaa kanneen akaakuu wal madaallii ibsan walmadaalchisa. Gatiin ulaagaa kanaa 0 yookiin 1 ta'uu danda'a. Gatiin durtii 1 walmadaallii barruu kan gosa qubeerratti hin hundoofne ibsa. Gatiin 0'n walmadaallii lamee kan gosa qubeerratti hundaa'u ibsa.
Dogoggora sa'aa darbee dhabamsiisuuf; yoo ulaagaan deebii inni jalqabaa hin jiraanne, ulaagaa walmadaallii hin qindeessin.